Ndiyakholelwa ukuba iB2B yeNtengiso yezeNtlalontle impumelelo iyabaxa | Martech Zone
Ndiyakholelwa ukuba iB2B yeNtengiso yezeNtlalontle impumelelo iyabaxa
Lwesine, Matshi 16, 2017 Lwesine, Matshi 23, 2017 Douglas Karr
Masiqale le ncoko ngokuthi bonke ubungqina bam buyinto engaqhelekanga. Andizange ndenze uphando olubanzi ukubonisa ubungqina bam; Ndiqhubeka nje ukuba nabantu abaninzi besebeza kum ukuba basebenzise imidiya yoluntu ukuqhuba iziphumo. Kwaye ababandezeleki konke konke; iinkampani zabo zenza kakuhle.
"Yima!", Uyabhengeza, "Bangenza ngcono kakhulu!"
Hayi. Enye yeenkampani ine-100% yokukhula kweYo kwintengiso enokhuphiswano. Akukho namnye kubunkokheli babo okanye kubaqeshwa abagcina ubume beendaba zosasazo ngokufanayo. Uninzi lwezikhokelo zabo zivela kwiinkomfa abaya kuzo kwihlabathi lonke. Baneqela langaphakathi lokuthengisa elilandela ezi zikhokelo kwaye liqhuba uguquko lwasekhaya.
Elinye ishishini lenze nje indawo entsha yeofisi kwaye liyazixhasa ngokwabo ukukhula kwabo. Banemveliso yokudityaniswa engenalo ukhuphiswano kumzi mveliso weShishini, kwaye batyikitya abathengi ngokukhawuleza njengoko benokubabonisa idemo. Ngokukrakra- akukho media zosasazo.
Andithethi nje ngokubeka iliso kwizilumkiso… ndiyathetha unothi umgudu obekwe kwizicwangciso zabo zosasazo lwentlalo.
Kwelinye icala, ndinenkampani enye endisebenza nayo endixelele ukuba akukho nto bayenzayo ngaphandle kokukhuthaza imithombo yeendaba zentlalo kuba isebenza kakuhle. "Yintoni enye ozamile ngayo?", Ndibuze. "Akukho nto, akukho mfuneko.", Utshilo umnini. Umtsalane, ke inkampani enye eveza iziphumo zemidiya yoluntu ayenzi nto ngaphandle kwemidiya yoluntu. Bayazi njani ukuba iyasebenza?!
Umntu endisebenza naye usandula ukundixelela ukuba i-CMO yakhe ibisandula ukubekwa emsebenzini emva kweenyanga zokunika ingxelo ebhodini. Ukujonga iphepha, ukulandela, ukuthanda, kunye neeRetweets… ngaphandle kokunxibelelana nayo nayiphi na ingeniso okanye ukukhula.
Sinomthengi obhiyozele amandla abo kwimidiya yoluntu, eqokelela into enkulu elandelayo kumaqonga eendaba ezentlalo. Basebenza nzima ngokungummangaliso ukubandakanya kunye nokondla uthungelwano lwabo lweendaba zentlalo. Kodwa xa kufikwa kwiidemo kunye nokukhuphela, amanani awazange abe nolungelelwaniso.
Ukuqwalaselwa kwam okungaqhelekanga kuyaqhubeka kunye neewebhusayithi zam. Ngelixa ndifumana ezinye i-nibbles nge-LinkedIn, i-Facebook kunye ne-Twitter zivelisa unothi ingeniso. Kutshanje ndivavanye kwaye ndaqhuba amashumi amawaka abafundi abongezelelekileyo ukuba bazibandakanye nomphathi we-Facebook. Ewe .. uyiqikelele. Khange ndiye.
Iingxaki ezine kwiNtengiso yeendaba zeNtlalo
Zine iingxaki ezenzakalisa amandla ethu okufumana intengiso enkulu enxulumene nemidiya yoluntu:
Injongo - Ngaba abalandeli bakho kunye nabalandeli kwimidiya yoluntu bayakulandela kuba baphanda ukuthengwa kwabo okulandelayo kwaye bajonge inkampani yakho? Uqikelelo lwam kukuba le yipesenti encinci yabaphulaphuli bakho bonke… kwaye kumnandi ukuzama ukuqonda ukuba ngoobani kanye kanye.
Igalelo -Utshintsho phakathi kwenethiwekhi yoluntu kunye neyakho kubahlalutyi igcwele izithuba, eyona nto inkulu kuzo zonke kukuthengisa okuvela kwiTwitter okanye kuHlaziyo lukaFacebook. Akunakwenzeka; Kunzima nje.
Imisebenzi -Bonke abathengisi bayakuthanda ukuzoba ifanele yakho yokuguqula kwaye baya kukuxelela ukuba ukuzibandakanya kubalulekile phakathi kolwazi kunye nokuguqula. Ingxaki asiyondlela; sisithuba esiphakathi. Abathengi bajonga ngolu hlobo lwefaneli epholileyo apho amathemba eqa inyathelo lokugqibela ukuya elilandelayo. Inyaniso yahluke kakhulu. Uguquko ziimayile ezikude nokunxibelelana nemithombo yeendaba zentlalo. Kungathatha iminyaka ukuqhuba igunya eligunyazisiweyo ekufuneka unalo. Le yitoni yomzamo kunye nembuyekezo encinci kutyalo-mali.
Zilize - ayiziva imangalisa xa ufumana amakhulu okanye amawaka eembono, ukuthanda, ii-tweets, ii-retweets, izabelo okanye ungeniso kukhuphiswano? Iyayenza-iqela lethu liyenzile kwaye liphakamile kwinqanaba lethu losasazo lwentlalo. Ingxaki, ewe, yayikukuba akukho nanye kwezi metriki ezikhokelela kulo naliphi na ishishini. Xa ifowuni ingakhali, abathengisi bayathanda ukwalatha kwimetric engento yokujikisa ingqalelo.
Abathengisi kufuneka basebenze ukusuka Ngeniso buyela emva kwithemba. Ukuqaphela ukuba ingeniso yakho ivelaphi kufuneka ibe yeyona nto iphambili kwaye uqhube ishishini ngokusebenzisa ezo ndlela kunye namajelo.
Anditsho ukuba imithombo yeendaba zentlalo ayizukusebenza okanye ayinakusebenza, ndiqaphela nje ukuba ndihlala ndibona utyalo-mali lokuthengisa kwezinye izicwangciso ezinembuyekezo ephezulu kakhulu kutyalo-mali, ezifuna umzamo omncinci kakhulu, kwaye kulula ukulandela umkhondo.
Andikunikezeli nakumajelo asekuhlaleni. Ndiyaqonda ukuba ulwazi lophawu, ukwamkelwa, igunya kunye nokuthembela konke kunokuqhuba iziphumo ezilungileyo. Ndijongana nje nesiphumo sokuba imithombo yeendaba zentlalo zihlala zibaxiwe. Ukuba nabani na ukuxelela ngokwahlukileyo, khangela phaya ishishini kwaye uphande ukuba bahlawulwa njani.
Uqikelelo lwam kukuba ayizizo ezentlalo.
tags: imbekoIintengiso ze-facebookLinkedInImidiya yokuncokolaulwazelelo kwimidiya yoluntuTwitter
I-Auphonic: Sebenzisa i-Podcast Audio yakho ngonqakrazo olunye